Imithwalo Yezintambo ne-Belt Factory - Abenzi be-China Lageage Strap & Belt nabaphakeli
Imichilo yempahla ibaluleke kakhulu ukwenza umthwalo usebenze endaweni yawo. Akunandaba ukuthi usebenzisa izimoto ezizimele, izitimela noma izindiza, ipotimende lizominywa kalula, umthwalo osepotimendeni uzoba ngobuningi. Lokho kuyinkinga impela. Ngosizo lwezintambo zemithwalo, ingeza amandla angaphandle epotimendeni ukulungisa umthwalo. Ungahlukanisa kanjani ipotimende lakho ezindaweni zomphakathi, amanye angasebenzisa amapotimende omkhiqizo afanayo nemibala efanayo, ungahlukanisa ipotimende lakho ngosizo lwezintambo zemithwalo. Lowo ngumsebenzi owodwa. Ngokungeziwe, ingangeza i-logo ezintanjeni zemithwalo. Ngemuva kwalokho imichilo yemithwalo ingasetshenziswa njengezipho zokunikeza abahambi. Izindiza zikhetha lolu hlobo lwezipho zokupha. Ibhande likhiqizwa ngamasentimitha ama-2 ububanzi, liphethe ibhande lokuphepha ukugcina umthwalo uvaliwe ngokuvikelekile. Izinto ezahlukahlukene zingakhethwa njenge-polyester, i-nylon nezinto zokulingisa ze-nylon. Phakathi kwalezi zinto zokwakha, impahla yenayiloni inekhwalithi engcono kakhulu futhi ihlala isikhathi eside. Ukulingisa inayiloni elandelayo bese kuba yinto ye-polyester. Ingenza ukukhetha okufanelekile ngokubheka ukusetshenziswa kwayo nezindleko zayo. Inqubo ehlukile ingasetshenziswa ku-logo njengokuphrinta kwe-silkscreen, ukuphrinta kwe-CMYK, ukufakelwa kwe-emboss, okulukiwe nokunye.